Haweenka Muslimiinta Malaysia oo tacaddi kala kulma baraha bulshada - BBC News Somali
Markii gabadh 15 jir ah oo dalka Malaysia u dhalatay ay barta Twitter-ka ku soo qortay riyadeeda ku aaddan inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee dalkaasi raysal wasaare ka noqota sanadkan, ayaa waxay la kulantay cambaareyn ku aaddan inaysan xijaabka xiran.
Surekha Ragavan ayaa su`aal ka qabta haddii haweenka muslimiinta ah ee dalkaasi u dhashay ay dhalleeceyn badan kala kulmaan baraha bulshada.
Ma aha wax qarsoon in haweenka meel walba oo ay joogaan ay u nugul yihiin aflagaaddo uga timaadda baraha bulshada. Dalka Malaysia, haweenka diimaha kala duwan haysta waxay la kulmaan dhalleeceyn, balse dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ayaa sheegaya in haweenka Muslimiinta ah si gaar ah loo bartilmaameedsado sababtuna ay tahay inaysan u dhaqmin sidii laga filayay.
Juana Jaafar, oo u doodda xuquuqda haweenka oo wax ka qabaneysa kiiska gabadha 15-jirka ah ayaa sheegeysa in baraha bulshada ay ku arkaan haweenka Muslimiinta Malaysia u dhashay loo bartilmaameedsado labiskooda iyo fakraddooda. Waxay xustay in gabadha lagu qasbay inay tirtirto cinwaankeeda.
Tan iyo intii haween badan oo Muslimiin da` yar ah una dhashay Malaysia ay u weecdeen dhanka baraha bulshada - gaar ahaan Twitter-ka, si ay uga hadlaan arrimaha haweenka, kiisaska dhibaatooyinka ay la kulmaan ayaa soo kordhaya.
Maryam Lee, oo ah 25-jir isticmaasha Twitter-ka dhowaanna joojisay xirashada xijaabka, ayaa la kulantay tacaddi lagula kacay, waxayna la kulantay hanjabaado ammaankeeda qalqal geliyay.
"Keliya maaha dadka oo aan jecleysan aragtidaada. Balse waa dadka oo waxyeelleynaya jirirtaankaaga iyo kalsoonidaada," ayay tiri Maryam.
Inkastoo ay muddo dheer dhibbane u ahayd cambaareynta ay kala kulanto baraha bulshada, Lee ayaa sheegtay in tacaddiga ay la kulanto uu sii xoogeystay markii ay shaacisay inay tahay qof haweenka u doodda.
Dhanka kale, marsashada makeup badan iyo dharka aadka ugu dheggan ama cayilka aadka ah ayaa ka dhigan dembi haweenka u nugleynaya tacaddiyada loo geysto.
Haatan, wax shuruuc ah oo ku saabsan tacaddiyada haweenka lagula kaco kama jiraan Malaysia, kuwaas oo haweenka ka difaacaya rabshadda ay kala kulmaan online-ka, sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay in wixii online-ka ka dhaca aanan loo qaadanw ax dhab ah.